German - Turkish Dictionary for mobile (java)
Nharembozha yeGerman yeMafoni Nhare - Duramazwi reTurkey (java)
ChiGerman - Duramazwi reTurkey (java) reMafoni ePhone
Inonyatsoenderana nematafura anotevera.
LG: KE970 Kupenya
Nokia: 2855, 2865, 2865, 3110, 3152, 3155, 3155, 3230, 5200, 5300, 5500, 6085 6086, 6111, 6120, 6125, 6126, 6131, 6133, 6136, 6151, 6152, 6155, 6155 Prism, 6165, 6230, 6233, 6234_Sirocco_Edition, 6260, 6265, 6265, E6270, E6275, E6275, E6280, NNX, NX, NX, NX, NX N6282, N6288, N6290i, N6300
SamsungD410, D415, D418, D500, D520, D600, D608, D800, D820, D828, D900, D908, E250, E330, E380, E388, E390, E490 uye E500 , E530, E570, E720, E730, E760, E770, P780, P788
Inogona kuiswa pane chero foni yerunhare inobatsira Java maitiro, haina zvachose uye hapana chepamusoro-mberi pamutsara wako.
Nhare yako inofanirwa kutsigira java pamwe nekukwanisa kuwedzera mafaira kubva kunze.
Nenzira iyi, unogona kushandisa nyore chiGerman duramazwi kana ukaisa faira rakakoswa uye uriisa kune faira yakakodzera yefoni yako.
Tinoshuva kubudirira kwamuri seboka rechiJerman.
Dzvanya pano kuti uite purogiramu / faira
Cherechedza: Purogiramu iyi inoparadzirwa pasina chekuita neAlmanx.
Iwe uchange uine kodzero dzekusununguka uye dzisingagumi kushandisa. Hapana chekubhadhara pasi kana kuwedzerwa mubhadharo yako nokuti unoshandisa purogiramu.
Elif anodaro 11 apfuura
inoita nokia x3 yakafanirwawo
Ndinofunga kuti handisi kupa faira ndakakanda foni yangu mukati uye hapana chiito chakanyanya icra
habibe anodaro 11 apfuura
Izvo zvinoenderana nefoni here?
Zvirongwa zveGermany anodaro 11 apfuura
Inopindirana nemapuraneti ose anotsigira Java.
zeuss anodaro 11 apfuura
samsung m8910 yeusiku
typhoon alper anodaro 11 apfuura
Hazvingave zvakanaka here kana ruzivo rwakadzama nezveduramazwi rikapihwa, zvakare?
ari halitatic anodaro 11 apfuura
Shamwari dzemamwe mafoni asi ini ndisina kugadzirisa zvachose kwechinguvana, shandura iyo .rar extension kusvika .jar uye uikande kufoni